कुमारित्वको सेरोफेरोमा सुहागरात - Younka Kura
written by YounKaKura January 14, 2018
“उससँग मेरो पहिलोपटक भेट भएको दिन म भुइँमा न भाँडामा भएकी थिएँ । एक त त्यत्रो नाम चलेको, कतिपटक सांसद्, मन्त्री भएको मान्छेको छोरो ! त्यसमाथि पनि अमेरिकामा पढेको । काम गर्दागर्दै बिहा गर्न नेपाल आएको । उता पढ्नेहरूका त उतै थुप्रा केटीहरूसँग सङ्गत हुन्छ भन्छन् । कोही केटी भएकी भए त त्यसैलाई बिहे गरिहाल्दथ्यो होला नि ! घरानियाँ भएकै हुनाले त आफ्नै देशमा आयो बिहे गर्न । उसको आग्रहमा त्यस दिन हाम्रै घरको बैठककोठामा आधा घण्टाजति मसँग उसको कुरा भयो । मान्छे साह्रै समझदार र अर्काका तर्फबाट पनि सोच्ने खालको लाग्यो ।
“पहिलोपटक भेटेको लोग्नेमान्छेसँग के कुरा हुन्छ होला र जस्तो लागेको थियो, तर उसको सरसता र फरासिलो स्वभावका कारणले होला, पहिलो दस मिनेटपछि त ऊभन्दा बढी मै बोलेँ हुँली । उसले मेरा कुरा पनि चाख मानेर सुन्यो । ‘पहिले कसैसँग मन बसेको थियो कि ?’ रे ! मन बसेको भए त उससँग त्यसरी कुरा गरीगरी ‘चिन्नु न जान्नुघचेडी माग्नु’जस्तै बिहे गर्न को जान्थ्यो होला र ? भागेर भए पनि मन बसेकै मान्छेसँग गइन्थ्यो होला नि ! अनि ‘कस्तो लोग्नेमान्छे मन पर्दछ ?’ भनेर त्यो के सोधेको होला ? मैले पनि ‘आफूलाई माया गर्ने, आफ्नो मात्र होइन अर्काको पनि साह्रोगाह्रो बुझ्ने’ भनिदिएँ । मेरो मुखबाट अनायासै निस्किएको थियो त्यो । मेरो जवाफ ठीकै त लाग्यो होला नि उसलाई ? नलागे पनि नलागोस्, मनमा लागेको साँचो कुरा भन्दा पनि ठीक नलागे के गर्नु त ? म पनि त एम. एस्सी.सम्म गरेकी, हाम्रो समाजमा पढेलेखेकैमा गनिने केटी हुँ । घर, खानदान पनि कम होइन । कस्ती घमण्डी रहिछ भनेर त सोच्नु नपर्ने हो । सोच्तैन होला ! उसको पनि त मनका कुरा छिटै बुझिदिनुपर्ने, उसका इच्छाहरूको कदर गरिदिनुपर्ने जस्ता सर्त छन् नि । घुमाएर भने पनि बुझिहालिन्छ त्यति त । उसको पनि ठूलो दोष त छैन त्यसमा । त्यति अपेक्षा त जस्तोसुकै हरिलट्ठक केटाको पनि हुन्छ । उसको पनि किन नहोस् ! जे भए पनि चित्त बुझेको छ; खुसी छु ।”
यस्तै केके कुरा मनमा खेलाउँदाखेलाउँदै आँखा झपक्क लागेर निदाइछु । भोलिपल्ट अलि ढिलो उठेँ, त्यो पनि ममीले उठाइदिएपछि । “तँ अझै सुतिरहन्छेस् ? केटापट्टिबाट फोन आइसक्यो । ‘जतिसक्तो छिटो बिहाको लगन जुराए हुन्छ, हामीलाई केटी चित्त बुझ्यो’ भनेर । हाम्री छोरी चित्त नबुझे उनीहरूकै अभाग हुन्थ्यो । ठीकै छ, पारखीले चिन्दछ हिराको जात !” ममीको बोलीमा खुसी र आत्मविश्वास दुवैको मिलिजुली भाव मिसिएको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
“त्यसपछि, कुरा छित्रेदेखि लिएर बिहाका सबै प्रक्रियाहरू सामान्य रूपमै भए । बीचमा कुनै असाधारण कुरो भएन । कुरा छिनेको दिन र त्यसपछि पनि एकदुईपटक उसले मलाई मोबाइलमै फोन गरेर बिहे अगिदेखि नै घनिष्ठता बढाउन सिनेमा हेर्न जाने, नगरकोट घुम्न जाने जस्ता प्रस्ताव नराखेको होइन । तर किन हो कुत्रि मैले त्यसमा चासो राखिनँ । पहिलोचोटि भेटेको पन्ध्र दिनमा लगन जुरेको छ । परिपक्व दुलाहादुलहीले के भर्खर अठार–बीस वर्षका केटाकेटीजस्तो उत्ताउलोपन देखाउनु ? ‘जेजे हेर्नु छ, जहाँजहाँ घुम्नु छ, बिहेपछि नै गरौँला । विवाहजस्तो जीवनको महत्वपूर्ण घटनाअगि त्यसको पर्खाइको मजा पनि लिऊँ न’ भनेर मैले उसलाई हाँसेर ठट्टा गर्दै टारिदिएँ । त्यसो भनेपछि मनमनै उसको बेचैनी सम्झेर मलाई एकातिर एक किसिमको आनन्द पनि लाग्यो भने अर्कातिर टीठ पनि लाग्यो !
“दिउँसोको लगन भए पनि बिहाका सबै औपचारिक विधि सक्ता र माइतीपट्टिबाट बिदा भएर नयाँ घर आइसकेपछि पनि भिœयाउने, सासूसँग मानापाथी भर्ने, चुल्ठा जोर्ने आदि विधिविधान गर्दा म शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमबाट थाकेर चूर भइसकेकी थिएँ । आफ्नो जन्मजात नाता र घरलाई टाढाको पारेर आएको अनुभूतिको न्यास्रोपन मैले पहिले अडकल काटेकोभन्दा छुट्टै खालको र मनमा एक किसिमको रित्तोपन ल्याउने खालको हुँदो रहेछ । मेरो मानसिक थकाइमा त्यस अनुभूतिको योगदान सबैभन्दा बढी रह्यो । खान पनि मन भएन । तर पहिलो दिन नै नखाइदिँदा यता घरपट्टिकाका मनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ला, उनीहरूको खुसियाली रमझमको वातावरण खल्लो होला भनेर जूठो मुख लगाएर उठेँ ।
“बेहुलालाई उसका साथीहरूले छाडेका थिएनन् । मद्यपान र नाचगान चली नै रहेको थियो । वेलावेलामा ‘भाउजूलाई पनि बोला नाच्न, कस्तो जोइटिङ्गे्र पो रहेछ यो त’ भनेको आवाज सुनिन्थ्यो । कहीँ मलाई साँच्चै लिन कोही आउने हो कि भत्रे डर लागिरह्यो । तर धत्र लिन चाहिँ कोही पनि आएन । ठूलीचाहिँ नन्दका छोराछोरी पनि अलि ठूला भइसकेका रहेछन् । निकै व्यावहारिक पनि रहेछ उनको सोचाइ । ‘भाउजूलाई हलुका टाउको दुखेजस्तो भएछ । एकछिन आराम गर्न पाए ठीक हुन्थ्योजस्तो छ, म उहाँलाई लिएर कोठामा आराम गराउँदै गर्दछु । विधिविधान केही बाँकी भए म ल्याउँछु’ भनी जिम्मा लिएरै कोठामा ल्याइन् र ‘भाउजू खुरुक्क आराम गर्नू, जरुरी प¥यो भने म उठाउन आउँली । ढुक्क भएर एक निद्रा सुते पनि हुन्छ’ भनेर ढाडस दिएर गइन् । मलाई ‘के खोज्छस् कानो आँखो’ भनेजस्तै भयो । कोठाको भव्य सजावट र सुहागरातको तयारीका विभित्र पक्षपट्टि ध्यान दिने इच्छा र शक्ति दुवै क्षीण भएकाले पलङमा अडेस लागेर भुसुक्क निदाइछु ।
“कतिबेरसम्म म त्यसरी निदाएँ, मलाई थाहा भएन । तर त्यही छोटो निद्रामा पनि एउटा मीठो सपना देख्न भने भ्याइछु । सपनामा उसले मलाई बिस्तारै हातमा पक्डेर पलङमा बसाएछ । अनि मेरा आँखासँग आफ्ना आँखा जुधाउन खोजेछ । मैले आँखा भुइँतिर फर्काइछु । फूललाई सुमसुम्याएजस्तो उसको हलुका स्पर्शको अनुभूतिले मेरो शरीर र मनभरि एउटा अनौठो नसा छाएछ । त्यस नसाले रोमाञ्चित मलाई त्यसपछि एक्कासि अगि कोठामा ल्याएर छाड्ने ठूली नन्दले घचघच्याएर ‘भाउजू, भाउजू’ भनेर उठाएको मात्र सम्झना छ । यतिखेर ब्युँझदा त्यो मीठो सपनाको प्रभाव र एकैछिनमात्र भए पनि शरीर र मनले पाएको आरामले थकाइ अलि कम भएको हुँदा वर्षौं अगिदेखि, अझ भनूँ म भर्खर किशोरी हुँदादेखि आफ्नो लोग्नेमान्छेसँग औपचारिक अधिकारका साथ एकान्तमा बिताउने पहिलो क्षणका कल्पना र सपनाहरू नयाँ पालुवा र फूलको सुवाससमेत लिएर गम्किन थालेको आभास हुन थाल्यो ।
“कोठाभित्र पस्ने बाटो छेक्ता दिदीबहिनीहरूसँग मोलमोलाइ गर्ने विधि पूरा गरेपछि कोठामा आएर भित्रबाट छेस्किनी लगाएर ऊ मतिर आउँदै गर्दा उसको भौतिक निकटताको आभासले मेरा खुट्टाहरू गह्रौँ भएर उचाल्नै नसकिने भएजस्तो लाग्यो । थुक सुक्यो, जिउ ढक्क जमेजस्तो लाग्यो । मुटुको चाल बढेर दम उठ्लाजस्तो भयो । अङ्गप्रत्यङ्ग कामे । मनको बगैँचाका फूलमा लागेका कोपिलाहरू पट्टपट्ट फक्रेर एक, दुई गर्दै दस, सय, हजार अनि लाखौँ फूलहरूमा परिणत हुँदै गए । मैले अफूलाई अनायास ती फूलहरूका माझमा पाएँ ।
“‘साथीहरूले भत्रु नभत्रु भने । ‘जोइटिङ्ग्रे’ पनि भने, तर तिमी आइनौ । के तिमीलाई कसैले खाइहाल्दथ्यो र ? त्यो मौका फेरि आउँछ ? म त तिमी पक्का आफैँ आउँछ्यौ भनेर बोलाउन पनि नआएको । तिमी यो बिहाबाट खुसी छैनौ कि क्या हो ?’ उसको स्वरमा नजानिँदो रोष थियो ।
“यो रोष खुसियालीमा मेरो अनुपस्थितिका कारणले उसले अनुभूति गर्नुपरेको एक्लोपनको गुनासोसँग सम्बद्ध भए जतिसुकै अव्यावहारिक भए पनि त्यो मेरा लागि शिरोधार्य थियो … तर दुइटा अरू कुरा पनि थिए जसले मेरा मनमा फक्रँदै गरेका फूलहरू हुरी आउँदा हल्लिएजस्तै गरी हल्लिए । एउटा, मेरा दुवै पाखुरालाई आफ्ना दुवै हातले पक्डेर मेरो अनुहारतिर निहुरिएको उसको मुखबाट निस्किएको रक्सीको ह्वास्स दुर्गन्ध अनि… दोस्रो, उसको स्वरमा प्रस्ट थाहा पाइने खालको लरबराहट । एकछिन त मलाई पहिलो रातमा यसरी रक्सी खाएर मेरा नजिक आउँदा उसको त्यस व्यवहारले एउटी नवविवाहिताका मनमा पर्ने असरको वास्ता नगरी उसले मलाई हेपेको सोचले म मर्माहत भएँ । अर्कातिर तुरुन्तै मैले आफ्नो मनलाई चित्त बुझाएँ… कस्तो सङ्कीर्ण मन मेरो ! पश्चिमी मुलुकमा पढेको, खुसीको अवसरमा साथीभाइसँग बस्ता करले पनि एकदुई पेग खायो होला । के भयो त ! यसमा मैले धेरै चित्त दुखाउनु ठीक छैन ।…
“मैले उसका दुवै हातबाट बिस्तारै आफ्ना पाखुरा छुटाउँदै भनेँ, ‘मलाई अलि सन्चो भएन, अनि हाम्रो समाजले बिहाको पहिल्यै दिन पुरुषलाई जस्तो स्त्रीलाई नाचगान गरिहाल्ने स्वतन्त्रता नदिएकाले हो । हजुरलाई अप्ठ्यारो परेकामा म दुःखित छु ।’
“‘त्यस दिनको विशेष महत्वका कारणले अप्रत्याशित रूपमा अप्रिय हुन लागेको वातावरणलाई सह्माल्न मेरो यो स्पष्टीकरणले ठूलै काम गर्नेछ र फेरि हामी सुहागरातको वातावरणको ताल्चालाई मिलेर खोल्न सफल हुनेछौँ ।’ म भुइँमा बिच्छ्याइएको गलैँचाका बुट्टातिर हेरेर सोच्तै थिएँ, उसले अलि पर रहेको दराजबाट एउटा बोतल ल्याएर त्यसलाई बेसरी हल्लायो अनि दाँतले त्यसको बिर्को खोल्यो ।
“बन्द भएको पाइप खोल्दा पानीको फोहरा छुटेझैँ त्यसबाट निस्केको फोहरा मतिर फर्कायो । हेर्दाहेर्दै मेरो अनुहार, ब्लाउज र सारीसमेत पनि त्यसले भिज्यो । पछि मैले अडकल लगाएँ, त्यो स्याम्पेन हुँदो हो; अङ्ग्रेजी साहित्य र फिल्मी दुनियाँका कथाहरूमा वर्णन गरिएको खुसीका वेला फोर्ने विशेष किसिमको रक्सी !
“तर त्यतिखेर नसोचिएको त्यस व्यवहारले म लाटाले पापा हेरेजस्तै भएकी थिएँ । छक्क पनि परेँ अनि अपमानबोधले मलाई नमीठो पीडाको अनुभूति भयो । सहिनसक्नु अपमानबोधको पीडाले छटपटिएकी म कतिखेर आफू बसेको ठाँउबाट जुरुक्क उठेर ढोकातिर लागिछु भत्रे आफैँलाई थाहा भएन । म कोठाबाट बाहिर जान लागेको देखेर ऊ भने एक्कासि कुदेर मतिर आयो… उसले मेरो कम्मरको पछाडि आफ्नो देब्रे हात राखेर मलाई कस्तरी ढेप्यो भने म उसको देब्रे हातको आड लिएर नउभिएकी भए भुइँमा उत्तानु पछारिन्थेँ । साथसाथै आफ्नो मुख मेरो अनुहारतिर ल्याउँदै ऊ मेरा कानमा साउती गरेजस्तो गरी भन्दै थियो, ‘जे भयो, भयो । आजदेखि तिमीमाथि समाजको भन्दा मेरो अधिकार बढी छ । सुन, अब म जसरी खुसी हुन्छु, त्यसै गर्नू । म पनि तिमीलाई मजा दिन्छु । तिमी पनि मलाई मजा देऊ । लेट अस इन्टरटेन इच अदर ।’
“के गर्ने के नगर्ने भत्रे द्विविधामा परेर अकमक्क भएको मेरो मनमस्तिष्कमा अरू केही सुझेन । अप्रत्याशित घटनाहरूको यस सिलसिलाले क्लान्त भएको मेरो शरीरलाई उसबाट टाढा राख्न उसको चिउँडालाई हत्केलाले घचेट्तै सङ्घर्षरत मेरो मुखबाट निस्कियो, ‘बिहेभ योरसेल्फ ।’
“त्यसपछि ऊ एक्कासि अलि ठूलो स्वरमा चिच्यायो, ‘अनडे«स… फास्ट… ह्वाट आर यु वेटिङ फर… यु हट नेपाली बीच… !’
“त्यसपछि उसले जे ग¥यो त्यो मैले त्यस किसिमले, त्यस समयमा, त्यस तरिकाले उसले गर्ला भत्रे सपनामा पनि चिताएकी थिइनँ । उसले दाहिने हातले मेरो सारी तानेर मलाई नङ्ग्याउन खोज्दै देब्रे हातले बेसरी मेरो कम्मर अँठ्याएर दुर्गन्धित सास फेर्दै गरेको आफ्नो मुख मेरा मुखमा जोत्यो ।
“बिजुलीको करेन्ट लागेजस्तो गरेर म उफ्रिएँ । मलाई नारीत्वलाई यति सहजै आफ्नो किनेको वस्तुसरह प्रयोग गर्न खोज्ने अगाडिको त्यो प्राणी अब मान्छे होइन, चिडियाखानाबाट भर्खर भागेको जङ्गली पशुजस्तो लाग्यो अनि हठात् मेरो मुखबाट निस्कियो, ‘थुइऽऽक्क पशु !’
“‘केरे, म पशु ?’ चिच्याउँदै रिसले पागलजस्तो भएर उसले आफ्नो दाहिने हातले मेरो देब्रे गालामा कति जोडले थप्पड हान्यो भने मेरा आँखाअगाडि तारा नाचे ।
“त्यतिखेर मलाई थाहै भएन, पछि मात्र मलाई होस आयो…
“… उसबाट मुक्त हुने प्रयासका क्रममा उसको थप्पडबाट मर्माहत भएकी मैले आफ्नो घुँडाले उसको छातीमा हिर्काइछु र आफ्ना दुवै हातले उसलाई कति जोरसँग घचेटिछु भने उसको टाउको म उभिएको ठाउँभन्दा बाह्र फिटजति पर रहेको भित्तामा ठूलो आवाजसाथ बजारिन पुगेछ !
लेखक: डा.सुबोधकुमार पोखरेल,
यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य बिशेषज्ञ (पुस्तक सृष्टिको रोमान्सबाट)
(यसपछि यसै संग सम्बन्धित प्रबन्ध पढ्नुहोस > कुमारित्वको सेरोफेरोमा सुहागरात)